यौन ब्यवसायीसँगको एकदिन – Hamropati.com
प्रकाशित मिती: 02-10 at 12:47pm
– विमल लामिछाने
उनी र म बिचमा फरक यती थियो की उनी धनाड्य परिवारमा हुर्किएका थिए, म मध्यम वर्गको मान्छे । उनले दिएको समय हेर्दै म आफ्नो तयारीमा लागे । उनले दिएको समयमा हामी जम्मा भयौँ । उनैको स्कारपियोमा हाम्रो यात्रा अघि बढ्यो । करिब एक सय मिटर पर अरु २ सााथी थपिए, मानौ योजना बनाए जस्तै गरेर चारजना जवानको करिब १ घण्टाको यात्रा पछि सधै झैँ चिया खाने निधो भयो । म तेसताका चियाको निकै पारखी थिएँ । त्यही भएर होला चिया खाने प्रस्तावलाई मैले सहज स्वीकारे । इन्द्रले स्कारपियो हुइक्याए र एक आलिसान महलको गेट भित्र हुले । गेटमा बसेका पहरेले हाम्रो प्रवेशमा स्यालौट मारि रहेका थिए । मलाईपनि यो आलिसान महलको प्रवेश असहज भईरहेको थियो । तर केही योजना होला भनेर बोलेको थिईन । मजस्तै अरु दुई साथी पनि हाम्रो यात्राको गन्तब्य बारे अन्योलमा रहेछन् ।
‘स्कारपयिो हलको पार्किंङ्गमा छि¥यो र रोकियो । इन्द्र अघि लागे हामी पछि–पछि । उनकै तालमा हामी तेश्रो तलामा सटासट पुग्यौँ, जहाँ दुबै पट्टि आधुनिक किसिमले सजाएका सफा टेवल र कुर्सीहरु थिए । इन्द्रले त्यही बस्न प्रस्ताव गरे ।
धेरै समय सुन्यतामा रयो ।
म मनमनै सोचिरहेको थिएँ, यीनीहरु कसरी यो पेसामा लागे होलान ? यीनीहरुसँग आन्तरिक कुरा खोतल्न सके न्यूज हुनेथियो की ? या हामीलाई यीनीहरुले नामर्द भन्दाहुन… या … यस्तै खुल्दुली भइरयो ।
यावत क्रममा समय वित्तै गयो, दुइवर्षपछि मेरी आमालाई पाठ्यघरमा घाउ भएको थाहा भयो, उपचार गर्न जाँदा धेरै पैसालाग्ने भएपछि थप समस्या भयो । मैले आफन्त र नातागोता सबै गुहारेँ तर कसैले सहयोग गर्न चाहेनन्, म आमालाई मर्नदिने पक्षमा पनि थिइँन, म पैसाको खोजिमा भौतारिरहेकी थिएँ । मेरो ठूलोबुबाले हामीसँग भएको घरखेत बन्दकी राख्ने भए उपचारमा खर्च सगाउने आश्वासन दिनुभयो, हामीले स्वीकार्यौ । तर कागजी काम सकेर पूर्जा हातपारेपछि ठूलोबुवाले पैसादिन आलटाल गर्दै जानुभयो, समय सार्दै जानुभयो र अन्त्यमा मैले पैसा दिन छैन, कागज बोल्छ भनेपछि हामीलाई षड्यन्त्रपूर्ण ढंगबाट फसाइएको रहछ ।
ठूलोबुवाले जे गर्छौ गर भन्दै हामीलाई घरबाट निकाल्नु भयो, ।”
साभारः समकालीन साहित्यबाट